Ọ dị mma ịme abs kwa ụbọchị? - Mmega
Isi > Mmega > Mmega ụlọ n'ụlọ - azịza na ajụjụ dị iche iche
Mmega ụlọ n'ụlọ - azịza na ajụjụ dị iche iche
Ọ dị mma ịme abs kwa ụbọchị?
Zụọ gịabs ọ bụlaotuụbọchị
Dị nnọọ ka akwara ọ bụla ọzọ, gịNgalabachoo ezumike! Nke a apụtaghị na ị gaghị arụ ọrụ akwara gị mgbe ị na-eme omume dị ka Planks, Inchworms, na omume ndị ọzọ na mmezi ya, mana ịkwesighi ịzụ hakwa ụbọchị.Ọnwa Ise 27, 2019
Kedu ihe bụ Chris Heria, nabata na vlog ọzọ. Ọ bụ afọ ọhụrụ na oge eruola ịmalite ma mechaa nweta isii mkpọ abs, mana tupu anyị abanye n'ime isii mkpọ abs, ị kwesịrị ịmara na ị nwere oke abụba maka ahụ gị ịhụ, yana ọ bụrụ na ịchọrọ lelee ihe na otu m si eri nri kwa ụbọchị, ị kwesịrị ịlele isiokwu m akpọrọ ihe m na-eri ma na-eme kwa ụbọchị iji nọrọ shred A siri ike ma mepụta mkpọ isii, dị ka pasent abụba dị ala, agaghị enye ị bụ igbe siri ike na akpụrụ akpụ ma ọ bụ n’azụ. Ikwesiri imebi afọ gị dịka ọ bụla ọzọ dị na ahụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ tokwuo ma sie ike.
Offọdụ n'ime unu nwere ike ịdị obere na abụba ahụ ma ha enweghịkwa abs nke ịchọrọ. Ọ na-abụkarị ndị mmadụ na-agbakwunye usoro ngwa ngwa na njedebe nke mgbatị ha kama itinye oge ọzụzụ niile na-abụghị izu iji rụọ ọrụ gị nke ọma. Nke a na - edugakarị na abs gị.
A naghị eme ka etolite etolite gị n'ihi na etinyego ọtụtụ ike gị na mgbatị gị. Ma mgbe ụfọdụ ọ na-amapụ kpamkpam n'ihi otu ihe ahụ. Ahụhụ gị dị ka akwara ọ bụla dị gị n'ahụ nke na-emewanyewanye ike na nguzogide, yana dịka otu akwara ọ bụla ịchọrọ ịmụba, ị kwesịrị isonye na ha karịa otu ugboro n'izu.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-etinye otu ụbọchị zuru ezu iji na-eme nkwụsị gị ma na-agbanwe agbanwe, yana nri kwesịrị ekwesị, ị na-amalite ịhụ ka ahụ gị gbanwere ma mesịa mepụta mkpọ isii. Izu isii na-adịchaghị mma, mana ọ ga - enyere gị aka n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmega ahụ ọ bụla ma bulie gị, ebe ụta gị bụ akụkụ dị mkpa nke akwara gị ma kwado mmegharị ọ bụla yana ịkwado nke gị. N'ihe banyere abs, ịchọghị ngwa ọ bụla ma ọ bụ mgbatị ahụ n'ezie.
E nwere ọtụtụ omume ị nwere ike ime nke ọma na ibu ahụ gị, taa m nwere si. emepụta x mkpọ abs na ụfọdụ n'ime ọkacha mmasị m omume na naanị iji gị onwe gị ahu arọ. Omume ahụ zuru oke maka ogo ahụike ọ bụla, site na ndị mbido ruo na ndị toro eto.
Ihe na-ekpebi ihe isi ike nke mmemme mmemme a bụ ike nke ị na-eme ya na ike gị, chekwaa ezigbo mma, ma gbalịa ịkwụsị n'oge ezumike. Anyị ga-eme mmega ọ bụla maka sekọnd 45 yana nkwụsịtụ 15 nke abụọ n'etiti. Ọ bụrụ n’ịga n’ihu, achọrọ m ka ị mee mmega ahụ ọ bụla maka sekọnd 40 na nkwụsịtụ 20 nke abụọ n’etiti ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido Achọrọ m ka ị mee mmega ahụ ọ bụla maka 35 sekọnd na nkwụsị nke abụọ 25 Na njedebe nke mgbatị a, ị ga-akụda akwara ọ bụla na azụ gị, site na ngwụcha ime na mpụga gị, ike gị, afọ, na afọ gị na-agagharị.
Ihe ị chọrọ bụ budata ngwa Heria Pro site na Storelọ Ahịa ma ọ bụ Playlọ Ahịa Google, mepee ngalaba mgbatị YouTube, mepee usoro a, mee ala ohere ma ị dị njikere ịga. Ihe omumu nke mbu mepere ma mechikwaa elu plank. Ka-esi n'ime a push-elu ọnọdụ.
Yabụ na ọ dị ka nke a ma ọ bụrụ na nke ahụ siri ike ị nwere ike ịpụ ma laghachi azụ. Ka anyị gaa sekọnd 45, pịgharịa isi gị, kpoo aka ahụ n'ala, malite ịhazi iku ume gị. Site na imi gị, ugbu a site n'ọnụ gị. (ọ joyụ music) Site na mmemme mbụ a anyị ga-eme ka ọ dị ọkụ, anyị na-akwado maka usoro ihe niile.
Ka anyị gaa, sekọnd 10 gara aga, ise, anọ, atọ, abụọ na otu. Ọ dị mma, anyị ga-agbanwe ọnọdụ na mgbatị na-esote. Anyị abdominal mọzụlụ si n'akụkụ ọzọ mmega angles, anyị na-enweta na ịnyịnya ígwè.
Ya mere aka n'azụ isi gị, ụkwụ gbatịrị agbatị, ikpere ruo ikpere. Oge ọ bụla ị gbanwere, piakota ma crunch. Ka anyị gaa, nkeji iri gara aga.
Ise, anọ, atọ, abụọ na otu. Ọ dị mma, gbatịa ihe ndị ahụ, were nke abụọ iji nweta iku ume gị. Omume ọzọ anyị ga-amalite bụ ịkpụ ụkwụ ma banye n'ọnọdụ ijide bolt.
Straightkwụ kwụ ọtọ, toso ike, aka elu. Site ebe a anyị na-amalite ịkpụ ụkwụ anyị. Ọ bụrụ na nke a siri ike nke ukwuu, ịnwere ike itinye aka gị ala ma ọ bụ jigide ọnọdụ ijide isi, jide n'aka na usoro a dum siri ike.
Kama ịkwụkwụ ụkwụ gị, mee ka ha kwụrụ ọtọ. Ihe doro anya na ị bụ, ka ị na-eji abs. Ikpeazụ ise ise, ise, anọ, atọ, abụọ na otu.
Ọ dị mma, were nke abụọ iji nweta ume gị, dozie nsị gị. Omume ọzọ anyị ga - ebido bụ oche ịnọdụ ala. Ya mere, ka anyị gaa n'ihu, dinara ala na ụkwụ gị dịka anyị nọ ọdụ n'oche, aka, ị chọrọ ịnwale imetụ ụlọ, sekọnd 45, ọ bụrụ na ike gwụ gị ugbu a ị nwere ike ịga n'ihu, ụkwụ gị Anwala ịkwụsị, na-aga.
Ikpeazụ 10 sekọnd, ka anyị gaa, ise, anọ, atọ, abụọ na otu. Ọ dị mma, gaa n'ihu na mmega ahụ ọzọ. Ihe ndị a ga-abụ nkwalite ụkwụ, yabụ ka anyị laghachite n'ọnọdụ ịgha ụgha, rie gị, ụkwụ gbatịrị agbatị ma kpọchie.
Want chọrọ iweta ya nke ọma, elu ala. Mee ka ụkwụ gị kwụ ọtọ, mee ka isi gị sie ike. Ikpeazụ 10 sekọnd, ka anyị gaa.
Ise, anọ, atọ, abụọ na otu. Ọ dị mma, ka anyị gaa n'ihu, gbanwee. Omume ọzọ anyị ga - ebido bụ na anyị ga - agbanwe ndị ugwu.
Yabụ ka anyị banye n'ọnọdụ nkwụ elu. Weta ikpere gị n'ikpere aka gị, gafee ma gbanwee; ozugbo ị kawanye mma na ya, bido nwetụ ngwa ngwa. Ka ị na-agbagọ, otú ahụ ka ị na-arụ ọrụ abs, yabụ nye ya ntụgharị dị mma ma weta ikpere gị elu, ndọtị zuru ezu na ala.
Ka anyị gaa, sekọnd 10 gara aga. 10, itoolu, asatọ, asaa, isii, ise, anọ, atọ, abụọ na otu. Ọ dị mma, anyị nọ na mmega ikpeazụ.
Ọ bụ usoro ọsọ ọsọ n'ezie, mana Absare m mechara nwee ọ onụ. Omume ikpeazụ bụ plank nke chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo ikpere aka gị. Ya mere, ka anyị banye n'ime ọnọdụ plank.
Chọrọ iweta ikpere gị niile ruo n'ikpere aka gị. 45 sekọnd, nke ikpeazụ m, mee ka ọ gụọ. Gwakọta abs gị.
Bịanụ, ọ fọrọ nke nta ka anyị nọrọ ebe ahụ, ihe niile i nwere. 10, itoolu, asatọ, asaa, isii, ise, anọ, atọ, abụọ, otu you nwere ya, isii mkpọ afọ ga-emecha nye gị ngwugwu isii ị na-achọkarị na 2021. Ọ bụrụ na ị na-eme usoro a kwa ụbọchị ugbu a, m ga-atụ aro ịme ya naanị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ, mana gịnị ma ọ bụrụ taa bụ afọ gị bụ isi? Thenbọchị ahụ achọrọ m ka ị mee nke a maka mgbatị ahụ zuru oke ma ọ dịkarịa ala okpukpu anọ.
Ozugbo ịmalite usoro a yana ndụmọdụ m kwuru na mbido isiokwu ahụ yana nke kachasị, jidesie ya ike mgbe niile. Ga - amalite ịgbanwe ahụ gị ma mechaa nwee ngwugwu zuru ezu, sie ike, mepụtara isii. Yabụ, ọ bụrụ na isiokwu ahụ masịrị gị, kpachara anya imebi bọtịnụ yiri ya.
Hapụ ikwu n’okpuru. Mee ka m mara ihe ị na-arụ ọrụ na ihe ịchọrọ isiokwu na-esote na isiokwu ahụ, ị ​​nwere ike ịkekọrịta isiokwu a na enyi gị chọrọ mgbatị ụkwụ isii na-enweghị atụ na ha nwere ike ịme kwa ụbọchị y n'ezie be real ones Iru nsonaazụ. Ọ bụrụ n’abụbeghị ịdebanye aha na ọkwa ka m na-etinye ụbọchị Tọzdee ọ bụla na elekere abụọ nke ehihe.
Oge Ọwụwa Anyanwụ na ọ bụrụ na ị kwuo okwu n'ime nkeji iri abụọ mbụ ị nwere ohere iji merie ụfọdụ maka uwe Heria n'efu. N'ikwu okwu banyere uwe nwanyị nke Heria, nchịkọta ọhụụ nke Heria bụ naanị ụbọchị ole na ole tupu ọdịda. You nwere ike chọpụta akụkụ niile nke nchịkọta yana ọnụahịa ugbu a na chrisheria.com Nchịkọta a nke ị hụrụ n'isiokwu ndị gara aga, dị ka ọsụsọ na-acha ọcha, ọsụsọ ojii, windbreakers, obere mgbatị, na uwe ogologo ọkpa m na-eyi ugbu a You nweta ihe n’ihu ya niile ree ka ijide n’aka na ị soro m na Instagram.
M ga-ekwuputa dobe ahụ na mbụ ma toaa ntị na ya, n'ihi na a ga-eresị anyị ngwa ngwa. Aga m anwa mejupụta asap na m ga-etinyekwa iwu tupu ị nwee ike idobe iwu gị. N'iburu nke a n'uche, daalụ maka ikiri.
Hụ gị na Tọzdee na-esote na 2 elekere. Oge Ọwụwa Anyanwụ.
Crazy ịhụnanya, udo pụta.
Kedụ ka m ga-esi nweta mkpọ isii n’izu abụọ n’ụlọ?
Ndewo onye obula, mmeghari abs nke taa na-ewe nkeji iri mana o na-akawanye njọ, abs gi ga-ahuru gi n’anya ma kpoo gi asato. Ndi be anyi, ihe omume a bu ihe efu ma echefula imecha bọtịnụ dị ka, denye aha ma mee ka ọkwa ahụ pụta. Ọ bụrụ n'ịchọrọ isonye na nsogbu a echefula ịhapụ okwu n'okpuru na ọganiihu gị ma ọ bụ jiri nke m Hashtag na Instagram Ma ọ bụ ọbụlagodi mepụta ederede YouTube dị ka ụmụ agbọghọ ndị a ka anyị nwee ike ịkwado ibe anyị ma bido. dị 30 sekọnd ọ bụla wee bịa na superset.
Ya mere, anyị na-eme mmega ahụ abụọ azụ wee were ezumike nke iri. Ka anyị bido mmemme mbụ bụ ụkwụ na - eme ka ụkwụ kụọ aka jiri nwayọ belata ụkwụ gị wee bulie ha elu, mechaa kụọ aka ma kụọ aka, hụ na azụ gị dara n'ala mgbe ị gbadaghị ụkwụ ebe ahụ. oge ezumike ebe a ndị mmadụ, anyị na-aga kpọmkwem n'ime crunch. Jiri akwara isi gị bulie úkwù gị n’elu ala.
Jide n'aka na ị gbanye ahụ gị ebe a. Anyị nwere ezumike nke iri na abụọ ma mmega ahụ bụ Spider-Man Plank. Weta otu ụkwụ n'otu akụkụ ma metụ ikiaka.
Ugbu a, jikere ịbanye n'ime onye na-arịgo obe. Mee ka ikpere gị dị nso na ikpere aka abụọ dịka o kwere mee ma kpoo isi gị. Ọzọ anyị nwere ntụgharị Russia.
Mee ya nwayọ na njikwa na akwa m na-ere ọkụ nke ukwuu na ebe a. Anyị ga-awụli ma pụọ ​​ozugbo. Ana m egbu gị ebe a mana ị na-eku ume ka ị na-agbatị ụkwụ gị ma na-eku ume ka ị na-enweta n'ụkwụ na afanyekwa nke gị Akwara ahụ ọnụ.
Zuo ike ma anyi nwere plank na hip dips. Omume a dị ezigbo mma maka ihe ọ bụla, ma ugbu a, ka anyị banye na Plank Jack iji jide n'aka na ị ga-eme ka isi gị na-agagharị ma kụrisịa nke a, ị nwere ike oge maka ezumike ọzọ dị mkpirikpi ma anyị nwere narị otu narị, nke gị na-eweta ụkwụ na ala. mee ka ikpere gị gbagọọ agbagọ ma ọ bụ kwụrụ ọtọ, ma kwụsị ịkwanye ụkwụ gị aka na ala. O siri ike.
Y’oburu na ichoro obere ezumike, odi nma. Jikere maka crunches ọzọ, piakota ndị ABS ahụ, anyị nọ ihe karịrị ọkara ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịme ya. Gbaa mbọ hụ na egwuri egwu gị siri ike na bum gị anaghị arapara ma ọ bụ dọba.
mee arọ blanket na-arụ ọrụ
Ugbu a kwadebe onwe gị maka plank ọnọdụ ọzọ, jide n'aka na gị isi bụ uko na gị glutes bụ uko na nkwekọrịta. Ọfọn, anyị nwere obere ezumike na ikiri ụkwụ bụ ihe ndị na-esote n'ikiri ụkwụ gị na aka gị na nke ahụ dịkwa mma maka mkpọda. Amaara m na m na-akwagharị unu ebe a, mana anyị ejirila ụmụ okorobịa na-emega ahụ.
Gaa na, zuo ike, ma ọzọ anyị nwere crunch agbara na mgbatị ụkwụ ọzọ. Jide n'aka iji akwara isi iji bulie úkwù gị elu. Ugbu a, dịrị njikere maka crunch ụkwụ kwụ ọtọ, mee obere bekee, ị ga - eme ikpere ikpere ma ọ bụrụ na ịchọrọ nke ahụ, na mmega ikpeazụ anyị nwere taa bụ plank na ala, ka anyị rụchaa nwa okorobịa ahụ, ị I nwere ike ime nke a Nke a bụ mgbatị ahụ m nwere olile anya na ọ masịrị gị Biko biko bulie mkpịsị aka gị elu ma denye aha ma gbanye ọkwa ka ị ghara ịchefu isiokwu ọhụrụ m, anyị ga-ahụkwa gị n'oge adịghị anya.
Kedu ihe omume 3 kacha mma?
Lee ụzọ 8 dị mfe ijimezuo isii-tinye absngwa ngwa na n'enweghị nsogbu.
Mee Cardio karia. Kekọrịta na Pinterest
MmegaAkwara Afọ Gị.
Mee ka oriri protein gị dịkwuo elu.
Gbalịa Ọzụzụ Dị Oké Mkpa.
Kwụsị iri nri esichara.
Bee na Carbs nụchara anụcha.
Dejupụta na Fiber.
kedu ihe bụ ụmụ okorobịa taa achọrọ m igosi gị omume ise iji nyere gị aka ịba abụba ọkụ ma hụ ụgbọ oloko ahụ ngwa inweta asix-pack abs abụghị naanị crunches, ọ bụkwa maka ịgba abụba oyi akwa ya mere ngwakọta a dị mma, ị na-emeziwanye gị cardio na igosipụta abstin gị ka ị ghara ịkọwapụta, yabụ mmega ahụ izizi bụ njikọta nke ụkwụ ụkwụ na-ebuli elu na crunches, mgbe ị na-eme nke a, ị ga-azụ obere ala na elu abs. Mmegharị abụọ bụ otu rep, na-achọ nzaghachi ugboro asatọ. na ime nke ahụ jide n'aka na ị ga - eme nkwekọrịta gị ma mee mmega ahụ na - abụghị ịkwụsị ịkwụsị nnukwu ikpere na - agba ọsọ n'ụzọ abụọ ị nwere ike ịme ụdị ọkọlọtọ tinye aka gị n'elu bọtịnụ afọ gị ma gbaa ọsọ mmega ahụ dị mma nke na - arụ ọrụ mgbatị na obere otu Ọ na-arụ ọrụ abs, na ọ bụ obi ọjọọ, yabụ mee nke a maka ihe dịka 30 reps en peeji nke abụọ na atọ okpukpu anọ 30 reps bụ ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịwube abss karịa ime nke a, ị nwere ike mepee ikiaka gị ma debe ya n'azụ isi gị, dozie ikiaka gi ma gbaa oso ugbua isi i gha inu inu gi jide ahu gi nke oma ma gbaa oso ma oburu na ichota na o siri ike karia odi nma ime ọkọlọtọ nke ogwe ma obu ije ije n’elu ebe kwesiri ekwesighi izu ike bu olulu oghere. oghere cylinder pụtara elu plank nwere a gbara gburugburu azụ protractions mgbe ị na-eme nke a ka ị na-agba ọkụ ihe odide gị, afọ gị iji wee na-eme ka ahụ gị gbanwee, ị ga-alaghachi azụ azụ na nkata abụọ na-eme otu abụọ, nke a bụ rep, ya mere megharia ihe ndi ozo, mee ka akwara ime gi laghachi na ikwughachi ya ugboro ugboro wee gaa n'ihu na ihe omumu siri ike nke ozo wee mee ihe omumu bu ihe kachasi ike nke ihe a nile dika amara. mmetụ aka ga-eme ka ikpere gị bata n'obi gị gbalịa na ị ga-ewepụ ọsọ gị site na ebe a, m ga-enweta otu Burpee dị ka ị ga-awụli elu ma weta ikpere gị elu n'elu ala, nke a bụ otu rep ma megharịa ihe niile n'ụzọ ziri ezi, yabụ isi okwu ya bụ na ị ga-ada nro ka. Kneesda ikpere elu ma site ebe a nke a dị oke mkpa ịmịnye nrụgide ahụ azụ azụ wee megharịa ugboro iri ọzọ ma enwere m ike ijide gị na obi gị na-agba ọsọ, ịgaghị eme ya na mmega ahụ abụghị nke siri ike, mana ọ siri ike ịme Ozugbo m mechara omume ndị a niile, m si ebe a pụọ, ịchọrọ iji ogwe aka gị na ibili, bilie, yabụ na ịchọrọ iji ike, nke a bụ ihe kwesịrị ekwesị nke abụọ site na ebe a, yabụ mee ngwa ọ bụghị gị pụọ naanị na ị maara laghachị azụ na nke gị nke a ga-ewute ọkpụkpụ gị aka nri achọrọ m ime ka ọ dị mma ma dịkwa mfe ịmalite ịgba akwụkwọ ike bilie ị nwedịrị ike ịmegharị ọnọdụ gị ma megharịa mgbe ị ka mma, ị nwere ike ịme ndị ahụ Ntughari 10 maka mgbatị ahụ a, yabụ na nke a bụ nnukwu, nnukwu set.
Ajuju a bu uzo ole ka igha eme na ise nke oru, were ihe ruru nkeji abuo izu ike n’etiti o bula ma megharia ya nke oma. Cheta na Asix-Pack-Abs abụghị naanị nkwekọ nke mgbatị ahụ a na-eme kamakwa mmemme ndị ọzọ dị ka pushups, ụgbọ elu na-awụlikwa elu na ịhapụ ụfọdụ igwe n'azụ. M na-azụ ahịa na mkpo na mkpokọta na omume ndị a niile na n'ikpeazụ I nwekwara ike ile ihe oriri m ebe a, ihe m na-eri kwa ụbọchị n'ihi na nri bụ 70 ruo 80 nke na-achịkwa ahụ gị na oke ahụ ike.
Na-agbanwe agbanwe, na-azụsi ike ma rie nri ma ị ga-enweta nsonaazụ
Kedu ihe mgbatị kachasị mma maka abs?
Ihe3Kasị dị irèAb Ọrụ
crunch na ihemmega ahụbọọlụ.
Eprel 5 2020
Nwere ike ịza abụba na abụba afọ?
Inwe Ike, MuscularNgalabaezughi oke
Ka ewerenweeakọwapụtaraNgalabama ọ bụ aisii mkpọ,gịkwesịrịnwetatufuo subcutaneousabụbanke giafọMpaghara. N'okpuru ala: Mgbatị gịNgalabaga-enyere ha akaibuike na muscular. Otú ọ dị,gịagaghị enwe ike ịhụ haọ bụrụha na-kpuchie subcutaneousabụba.
Nwere ike ime nkeji 10 kwa ụbọchị?
InwetaNgalabanwere ike were karịa10nkeji kwa ubochi, mana enwere uzo ato di nkpa n’ebe otusite nausoro na nke ahụ bụ iri nri ma na-emega ahụ nke ọma, nke ọma, na mgbe niile. Dika odi otua, otutu ndi mmadu akowaalaNgalaba, karịsịaọ bụrụugbua mgbatị a ịrịba ego, ma haNgalabaha na abụba afọ na-ekpuchi.Eprel 10 2020
Ndi osisi n’enye gi abs?
A kwesịrị ekwesịplanketinye akaabia, ee, kamakwanke gin'ubu, azụ, adịgboroja na quads.Osisia ga-akwụ ụgwọ dị ka iwu-meeab agagharị ma ọ bụrụgị'jisie ike maka ịmalite isi ike.Eprel 30 2021
Oche bekee na-ere abụba?
Plankbụ otu n'ime kalori kachasị mmana-ere ọkụna ihe omumu bara uru. Aplankjigide otutu akwara n'otu oge, si otú ahụ na-erite uru bụ isi nke ahụ gị. Ọ bụghị naanịna-ere ọkụiheabụbagburugburu ime afọ gị, ha na-arụkwa ọrụ site n'inye gị ọnọdụ ka mma, mgbanwe dị ka nke ọma.23 jan. Dec 2019
Ngwunye AB ọ zuru ezu maka abs?
Masite narollouts na-adịghị nnọọ achọ ike si gịNgalabana akwara ndị ọzọ a kpọtụrụ aha. Ha chọrọ ịmekọrịta mmekọrịta yana. Iji jiriab wheeln'ụzọ ziri ezi, i kwesịrị oké isi ike na plank ọnọdụ nakwa dị kaeziike ahụ dị elu, karịsịa n'ubu, azụ na aka, ka Jenkins na-ekwu.Dec 6 2018
Nkeji 5 nke abss otu ụbọchị zuru?
Ogologo mgbatị ahụ anaghị arụ ọrụ nke ọma na etu mgbatị ahụ si dị irè ma ọ bụ nke ọma, ọkachasị mgbe ọ bịarasite namgbatị - n'eziokwu,a ise-nkeji ogemgbatị ahụ nwere ike ịdị irè, ọ bụrụhaala na ị na-eme mmega ahụ dịgasị iche iche nke na-eme ka akwara dị iche iche dị iche iche ma nwee ụdị dị mma.Ọkt 15 2020
Nkeji iri abụọ nke mgbatị ahụ ezuola?
Uru nke ime airi abụọ-Nkeji, isi ucherụpụtadị ka nke a kama ịgwakọta na isi ọrụ na sekit zuru ezu ma ọ bụ na-eme mkpumkpuabs mgbatịbụ ike ọgwụgwụ zuru okeafọmọzụlụ ruo n'ókè nke nkwarụ akwara, nke ga-eduga na ike kawanye mma, Kara na-akọwa.Eprel 18 2020